Imibuzo evame ukubuzwa - Beihai Composite Materials Co., Ltd.
Q: Yini i-AFP (Aluminium Foam Panel)?
I-Aluminium foam iyinto entsha yensimbi yomqondo ekhihlizwe ngesimo sesiponji ngemuva kokuncibilika kwe-ingot ye-aluminium enezithako ezahlukahlukene zamakhemikhali futhi enezinhlaka eziningi zangaphakathi zepore cell.Yisakhiwo samaselula esine-aluminium eqinile equkethe ingxenye enkulu yevolumu egcwele igesi izimbotshana. Ama-pores angakalwa (igwebu leseli elivaliwe), noma angakha inethiwekhi exhumekile (i-foam evulekile yeseli).
Q: Yini okuvulwa iseli aluminium foam foam?
Ifaka ukuthi wonke ama-pore cell axhumene ngaphakathi futhi futhi anomoya omuhle womoya ngenkathi ubamba umsindo. Inezinhlobonhlobo zezicelo ezibandakanya ukushisa okushisa (i-compact electronics Ukupholisa, amathangi e-cryogen, kanye ne-PCM heat exchangers), ukumuncwa kwamandla, ukusabalala kokugeleza kanye nokukhanya kwesisindo okulula.
Q: Yikuphi okunye ukusetshenziswa okuvamile kwe-AFP (pen-cell) yethu?
Igwebu elinamaseli avulekile lisiza kakhulu ekushintshisaneni / kosinki bokushisa, izihlungi ezisezingeni eliphakeme, ama-electrode anezimbobo, izakhiwo ezixakile, izilawuli zokugeleza koketshezi kanye nama-cores wezinto ezihlanganisiwe.
Q: Yini okuvaliwe iseli aluminium foam foam?
Ama-pores angaphakathi avaliwe futhi avimbelene komunye nomunye. Iqukethe ukuqina okuphezulu. isisindo esiphansi (singantanta emanzini), nokufakwa kwamandla okuphezulu. Ngaphandle kwalokho, nathi singakwazi ukushaya izimbobo ku-AFP yeseli evaliwe.
Q: Yini ukusetshenziswa kwe-AFP (iseli elivalekile)?
Lokhu okushiwo ngenhla kuhlanganisa i-AFP (close-ell) ukuze ikwazi ukuthola izidingo ezithile ngaphakathi kwezimboni zezimoto, ezezindiza, ezezitimela kanye nezokwakha izinjini. Iphinde ifanelekele ezinye izinhlelo zokusebenza ezingaba namandla aphezulu emkhakheni wezokwakha nokuklama lapho kuvikelwa khona ugesi, ukumiswa kwesakhiwo, ukumelana nelangabi, kanye nokwakheka kobuso bokuhlobisa kuyadingeka.
Q: Kungani ukhetha i-China Beihai Aluminium Foam Panel?
Iphaneli yethu ye-foam ye-Aluminium isetshenziselwa ukufakwa komsindo, ubufakazi bomsindo, ukucisha umlilo nokungangeni manzi. Ngaphandle kwalokho, ifaka amandla aphakeme, i-ultra-light, i-100% enobungani futhi evuselelekayo eyenza i-AFP yethu iphakame kuneminye imikhiqizo efanayo, njengekhekheba lezinyosi, njll. Izinzuzo ezibalulwe ngenhla zenza i-AFP yethu ikwazi ukuthola izidingo ezithile okufana nojantshi, imboni yokwakha izinjini noma okunye ukwakhiwa nokwakhiwa ngaphandle noma ngaphakathi.Amapaneli ethu angenziwa ngomshini kalula njengokhuni, kusetshenziswa izindlela ezijwayelekile njengokusaha, ukubhola, njll. uphahla, udonga naphansi.
Q: Yini esiyisebenzisayo ukuhlanganisa?
Usimende noma ezinye izinto zokwakha ezijwayelekile, njengeglu.
Q: Yini i-M0Q (ubuncane be-oda ubuningi)?
I-oda elincane lingu-500m '.
Q: Ngingathanda amasampula athile, ngingawathola kanjani?
Amasampula wemikhiqizo yethu ahlala etholakala. Vele usibhalele i-imeyili, abasebenzi bethu bezentengiso bazobuyela kuwe bakuhlelele i-ASAP.
Q: Ingabe amasampuli amahhala?
Ngokuvamile, amasampula amancane amahhala futhi sizokhokha nezimali zokuhamba okokuqala. Kodwa-ke, uma udinga amasampula amakhulu, zonke izinkokhelo zizothwalwa ngawe, kufaka phakathi imali yesampula, imali yokuhamba, njll.
Q: Can l uvakashele imboni yakho?
Cha, asivunyelwe amaklayenti ethu ukuthi avakashele imboni yethu njengoba imikhiqizo yethu iyimikhiqizo emisha yelungelo lobunikazi. Kepha, sizokuvumela ukuthi ubone igumbi lethu lokubonisa e-Jiujiang.
Q: Uyini umehluko we-AFP yethu nezinyosi?
Ikama lezinyosi lihluke ngokuphelele kwi-AFP yethu futhi lingasetshenziselwa ukumelana nokushisa kuphela. Kodwa i-AFP yethu ayikwazi ukusetshenziselwa ukumelana nokushisa kuphela, kepha futhi nokuvala umsindo, ukuvimba umsindo, ukuvimba umlilo namandla ukumunca amandla.Ubuningi bephasi lezinyosi i-aluminium floor iphakeme kune-ultra light porous aluminium foam floor ngoba ifreyimu yesigaba se-aluminium iyadingeka kwikhekhe lezinyosi izinhlangothi ze-aluminium phansi kepha hhayi ibhodi le-ultra light porous aluminium foam sandwich. Lokhu kuveza ukuthi izindleko zaphansi kwe-honeycomb aluminium ziphakeme kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-ultra light porous aluminium foam foam sandwich board inokusebenza okuphezulu kakhulu kumandla wamandla, ukufakazela umsindo, ukushaqeka kokumunca, ukufudumeza ukushisa kune-honeycomb aluminium.
Q: Uyini umehluko wesitezi sethu se-Aluminium Foam esinezinkuni?
I-ultra-light porous aluminium foam floor ehle kakhulu ekusebenzeni futhi ishibhile endaweni yeyunithi minyaka yonke, ngakho-ke utshalomali luphakeme kancane.
Q: Sekukhona okokusebenza kwe-acoustic okusetshenziswa kabanzi, njengoboya bengilazi, i-asbesto, njll, kungani kufanele ngikhethe igwebu le-Aluminium yakho?
Uma kuqhathaniswa nezinto ezisetshenziswa kakhulu ukumunca umsindo njengoboya bengilazi, i-asbestosi, okokusebenza okusha-- i-aluminium foam ibonakala ngamandla agobayo aphezulu, ukuzisekela, ukumelana nokushisa okuphezulu, ubumsulwa, ukumuncwa umswakama ophansi. Lezi zinzuzo ezingenhla zenza indima yazo ebalulekile ekuboneni okuzwakalayo ngokwakhiwa kwesikhala.
I-Ultra light porous material iyinto efanelekile ukuncela imisindo esitimeleni esingaphansi komhlaba sasemadolobheni, ujantshi omncane nezithuthi zomphakathi nokwenza ngcono imisindo emakamelweni e-acoustic, amahholo wezinhloso eziningi. Inamathiselwe ezakhiweni zikakhonkolo noma zensimbi futhi zimiswe e-viaduct naphezulu phezulu ezinhlangothini zombili, ingasebenza njengodonga olukhulu lokuvikela umsindo, kunciphise umsindo wethrafikhi edolobheni; futhi ingasetshenziswa kumasifundisane, imishini yokusebenza, iminyango yangaphandle yokwakha indawo ukuncela umsindo.